ग्राण्डीले घरघरमा पीसीआर परीक्षण गर्ने - Chandragiri News
Home स्वास्थ्य ग्राण्डीले घरघरमा पीसीआर परीक्षण गर्ने
ग्राण्डीले घरघरमा पीसीआर परीक्षण गर्ने
२०७८, १९ जेष्ठ बुधबार १२:०५
काठमाण्डौ । ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले घरघरमा पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ।
नयाँ भेरियन्टसहित दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेसँगै पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो समय अस्पतालले घरघरमा पुगेर बिरामीको स्वाव संकलन गर्न लागेको हो।
अस्पतालका महाप्रबन्धक विकासमान सिंहले बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म बिरामीका घरघरमा पुगेर स्वाव संकलन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘गत बुधबारदेखि पीसीआर परीक्षण ल्याव सञ्चालनमा आएसँगै बिरामीको सहजताका लागि घरघरमा पुगेर स्वाव संकलन गर्न लागेको हौँ’उनले भने।
स्वाव संकलनको रकम अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्थासमेत अस्पतालले गरेको छ। पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट भने इमेलमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिमा पु¥याउने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ।
अस्पतालले पीसीआर परीक्षणका लागि रु एक हजार ५०० शुल्क तोकेको छ। यस्तै, बिरामीको घरमा पुगेर स्वाव लिएमा सेवा बापत थप रु ५०० लाग्नेछ। सरकारले रु दुई हजारसम्म पीसीआर परीक्षणका लागि शुल्क तोकेपनि अस्पतालले सरकारले तोकेको दरभन्दा कम शुल्कमा परीक्षण गर्न लागेको हो।
सहुलियत दरमा पीसीआर परीक्षण सेवा यही जेठ ३१ गतेसम्म प्रदान गर्ने र अस्पतालमा पीसीआर आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म तथा शनिबार बिहान ८ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म हुने जनाइएको छ।
‘थर्मफिसर क्वान्ट स्टुडियो फाइभ’ नामक अत्याधुनिक मेसिनबाट एक पटकमा ९६ को स्वाव परीक्षण गर्न मिल्नेछ। परीक्षण प्रयोगशाला जडानसँगै अब बिरामी, अस्पतालका डाक्टर तथा कर्मचारी पीसीआर परीक्षणका लागि अन्य अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था जानुनपर्ने भएको छ।
स्वाव संकलन गरेको ५ देखि ६ घण्टाभित्र बिरामीको रिपोर्ट आइसक्ने अस्पतालले जनाएको छ। उक्त प्रयोगशालामा कोभिड बाहेक अन्य भाइरसको समेत परीक्षण गर्न मिल्नेछ। आगामी दिनमा बिरामीको चापअनुसार पीसीआर परीक्षण सेवा विस्तार गर्दै लैजाने सो अस्पतालले जनाएको छ । विस २०६९ सालमा स्थापना भएको ग्राण्डीमा २०० भन्दा बढी शय्यामार्फत बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ। रासस
Previous articleनिषेधाज्ञाको मौकामा व्यापारीको रजाइँ
Next articleचौधरी ग्रुपकाे बियर प्लान्टमा भीषण आगलागी
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा असोज ४ गतेदेखि लगाइने
असोज २ गते Happy Satungal Society ले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने
हतारमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
नेपाली कांग्रेस काठमाण्डौका नगर अधिवेसन सर्यो , के छ निर्वाचन समितीको बिज्ञप्तिमा ?
विजयी भव: सहकारी संस्था लि. बिदाका दिनमा पनि खुल्ने
नेपाली कांग्रेस चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं ११ को इकाई सभापतिमा सिंह बहादुर महर्जन
काठमाडौँ महानगरका विद्यालयहरु असोज १० गते बाट भौतिक रुपमा खुल्ने